November 25da ayaa ah maalinta aduunka ee ku beegan ciribtirka u gacan-qaadida haweenka.
Buluugleey November 24, 2005
November 25da oo ah maalin Qaramada Midoobay ay u aqoonsatay ciribtirka u gacan-qaadka haweenka ayaa waxaa la filayaa in dawlado badan si qumaati ah u wajahaan dhibaatooyinka loo geysto haweenka. Waxaa jirta in dalal badan ay weli haweenka kula kacaan jirdil, kufsi, xaqiraad iyo dhac intuba, waxaana uwehliya arrima kaloo aad u fool xun ee ka baxsan bini'aadnanimada.
Warbixin cusub ee ku saabsan ku xadgudubka haweenka ayaa tilmaameysa in saddexdii haween oo dunida ku nool mid ka mid ah loo gacan qaado. Waxaa kaloo la ogaaday in gacan-qaadka haweenka loo geysto ku badan yahay gabdhaha ay da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 jir.
Haweenka ayaa gacan-qaadka u wehliya dhibaatooyin khatar ee keeni kara in ay ugu danbeyntii u geeriyoodaan. Waxaana ka mid ah kufsiga oo maarar badani wehliyaan cudurka dilaaga ah AIDSka sababana in haween badani ku la’daan. Waxaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka jira in ay xitaa haweenka la qabo loo gacan qaado oo marar badani dhacdo in hooyadu lagu hordilo ama lagu aflagaadeysto iyada oo caruurteeda ay goobjoog yihiin.
Dhibaatooyinka la xiriira jirdilka, kufsiga, qudhgooyada, dhaca ayaa ah mid si gaar ah u taabaneyso wadanka Soomaaliya oo ilaa haatan aan ka jirin nidaam dowladeed oo badbaadiya ama sugi kara amaanka haweenka. Haweenka oo qeyb weyn kaga jiraan dhismaha mujtamaca ayaan istaahilin xaqiraad in loo geysto ama wax ka baxsan bini'aadninimada.